IMEX: Ngoku ayiloxesha lokuba ishishini lime ngxi
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zeShishini lokuhlangana » IMEX: Ngoku ayiloxesha lokuba ishishini lime ngxi
Ukuhamba ngeshishini • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iintlanganiso • iindaba • Ukwakha kwakhona • Tourism • Intetho yezoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iimfihlo zohambo • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Matshi 30, 2021
Iqela le-IMEX lityale imali kwiqela lalo ngokuqeshwa kwabatsha abali-9 njengoko lilungiselela i-IMEX America kulo nyaka kunye ne-IMEX Frankfurt ngo-2022.
Ukwakha ngcono ibinzana esilivayo ngakumbi nangakumbi ngaphakathi nangaphandle kolu shishino lweziganeko.
Kwi-IMEX, iindima ezintsha zenziwe ngaphakathi kweshishini ngotyalo-mali olubonakalayo kwiinkqubo, ukuthengisa kunye noyilo.
Ezi ndima zintsha ziyinxalenye yokuzibophelela kweQela ekwakheni ezona ndawo zorhwebo zibalaseleyo kunye neendawo zentengiso kushishino lweziganeko zeshishini.
I-CEO yeQela le-IMEX, uCarina Bauer, ugxininise ukubaluleka kokugcina utyalomali kwishishini ngemo yezulu ecel'umngeni xa wathi: Siphila ngoku kwiqela le-IMEX kwaye sakha ukomelela kwethu ngokutyala imali kwiindawo ezahlukeneyo zeshishini, siqala ngokuqeshwa kwabantu abatsha kunye nendima entsha kwinkampani. ”
Iindima ezintsha ezininzi zenziwe ngaphakathi kweshishini kutyalo-mali olubonakalayo kwiinkqubo, ukuthengisa kunye noyilo. UGary Coombes ujoyina njengeGosa loLwazi eliyiNtloko. Ngaphambili i-COO kwii-Crunch accountants, uGary usebenze kwi-EMAP nakwi-UBM apho ebesebenza khona ekuthengeni nakwiminyhadala emitsha, elungelelanisa ukuthengisa kunye nokuThengisa kwi-EMEA yonke. Kwindima yakhe entsha azimisele ukuyakha kubacebisi awabanika iqela le-IMEX kunyaka ophelileyo, elawula iinkqubo zokudityaniswa kunye namanyathelo edatha. UGary uthi: “Ndichulumance kakhulu kukujoyina i-IMEX ngexesha elibaluleke kangaka kushishino nakwimisitho ebanzi. Emva kokusebenza kumzi mveliso ubuninzi bobomi bam, andinakulinda ndize ndibone iminyhadala ephilayo isenzeka. Imiboniso ye-IMEX intle kwaye ndijonge phambili ekubeni nako ukubanceda baguquke, baqhubeke nokukhula kwaye baphumelele. ”
Uxanduva lwesicwangciso somxholo kunye nezixhobo, uphuhliso lwewebhu kunye neeprojekthi zenguqu kwidijithali, uDanielle Colyer wonyulwe njengeNtloko yokuQulathiweyo kunye neWebhu. Owayesakuba yiNtloko yeHlabathi yoMxholo kwiQela le-YNV, uDanielle unamava abanzi kwintengiso ye-B2B kunye ne-B2C, uphawu kunye newebhu ngaphezulu kweminyaka elishumi yamava ekwenzeni umxholo onempembelelo kwiinkampani kubandakanya amaBhaso amaDigital Magazine kunye neQela lokuFunda. UDanielle uthe: “Kuyandivuyisa ukujoyina iqela le-IMEX. Umxholo sisixhobo esinamandla ngokumangalisayo kwizixhobo zethu zokuthengisa kunye nento eyi-IMEX esebenza kakuhle kakhulu. Injongo yam kukuphakamisa lo mxholo ubalaseleyo kuyo yonke iwebhusayithi yethu ukuze ikwazi ukubandakanya, ukonwaba, ukwazisa- kwaye ekugqibeleni, ukuguqula abaphulaphuli bethu.
Lowo wayesakuba nguMlawuli wezobuGcisa eGrazia UK, u-Anna Gyseman ujoyine njengoMphathi woYilo egxile kuyilo lwegraphic, uyilo lwedijithali, kunye nezikhokelo zohlobo. Ubungcali bakhe bokuyila kungekudala buza kuncediswa kukuqeshwa koMyili oMncinci. U-Anna uthi: “Sonke sinqwenela ukuqinisekiswa yinto esiyiqhelileyo kodwa kwi-IMEX siyayiqonda nendima yethu ekukhokeleni ukuqhubela phambili kwihlabathi elitsha elinenkalipho. Injongo yam kulo nyaka kukuqinisa ukuzithemba kwi-brand ngokuyiqhubela phambili ngendlela entsha nene-innovative-ukunika inqanaba lokuziphatha kuyilo oluqhelekileyo ngelixa ndizama ukufumana impendulo yoqobo. ”
Ezinye iindima ezintsha ngaphakathi kweQela le-IMEX zibandakanya uMphathi oThengisayo oPhezulu kwiqela lokuThengisa, uMhlalutyi weDatha kwiqela leTekhnoloji yoMsitho kunye noMhlalutyi wezezimali omtsha. Iqela loMthengi oLindelweyo liza kuthathela ingqalelo ukugxila kubathengi kunye nokuqeshwa kwabaphathi abatsha bobudlelwane kunye noMphathi wezohambo.
UCarina uqhubeke wathi: “Ezi ndima zintsha ziyinxalenye yokuzibophelela kwethu ekwakheni ezona ndawo zorhwebo zibalaseleyo kunye neendawo zentengiso kushishino lweziganeko zeshishini - imishini esizimisele ngayo. Ukongeza, zincedisana nenjongo yethu yokudala imeko yeqela eliguqukayo kwaye eligudileyo, lixhaswa ngumcebisi uJon Barnes othethe ngale ndlela iqhubela phambili ngoFebruwari wethu. podcast. Ukuphazanyiswa konyaka ophelileyo kwatyhala amalungu eqela lethu ukuba aphume kwimimandla yabo yokuthuthuzela, ihlala ibonisa izakhono thina-kwaye bona-babengazi nokuba banazo. Ngenxa yoko, sakha ngokutsha imibutho yethu ukuze inike abantu inkululeko noxanduva ngakumbi, ebavumela ukuba bakhule, bakhanye kwaye benze igalelo elikhulu. ”
"Njengokuba imiboniso yethu iguquka ukuze iphendule kwiimfuno zabathengi kunye nemiboniso, indlela yethu yokusebenza nayo iyaqhelana. Ngoku ayiloxesha lokuba ishishini lethu lime ngxi. Sikholelwa ekubeni kubalulekile ukuqhubeka nokutyala italente yethu, inkcubeko yethu kunye nokudala amathuba amatsha kwiqela lethu ukuze sihlale sikhawuleza, siyile kwaye siphendule kwiinguqu kwihlabathi, ”uqhubeke njalo uCarina. “Aba utshintsho luya kunceda njengoko siceba kwangaphambili umboniso wethu olandelayo -I-IMEX America ngo-Novemba kunye nesikhumbuzo sethu sama-20 e-IMEX eFrankfurt ngo-2022. ”
IMEX yaseMelika yenzeka ngoNovemba 9-11, 2021, kwikhaya layo elitsha iMandalay Bay eLas Vegas.